Accueil > Gazetin'ny nosy > Minisitry ny Menetep : Hatao inona ny “bonbon” 8 miliara ariary?
Minisitry ny Menetep : Hatao inona ny “bonbon” 8 miliara ariary?
Miteraka resabe eo amin’ny tontolo ny fanabeazana sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arak’asa MENETEP izay indraiketan’i ramatoa Minisitra Andriamanana Josoa Iarintsambatra Rijasoa. Tamin’ny faran’ny herinandro ity dia nandeha be teo amin’ny tambazotra tserasera “facebook” ny fisian’ny “bonbon” be dia be ao amin’ny ministeran’ny fampianarana ao Anosy ity.
Mandeha dia mandeha koa ny resaka na any amin’ny tambazotra tseraserasa ireo sy amin’ny tontolo politika sy sosialy fa 8 miliara ariary no nividianana “bonbon” tao amin’ny minisitera MENETEP ity. Samy manana ny fomba filazany ny olona eo anatrehan’ity “bonbon” be dia be ity. Raha nanontaniana mahakasika ireo bonbon ireo tamin’ny mpiasa tao amin’ny ministera ny fampianarana izay tokony hahalala ny momba ireo “bonbon” ireo izahay dia tsy nisy afaka nanome fanazavana momba izany ny mpiasa tao fa raharahan’ny lehibe io hoy izay iresahana sy anontaniana.
Niezaka ny nihaona tamin’ny sekretera jeneraly Razafimahefa Herimanana momba ity raharaha ity izahay tato amin’ny La Gazette de la Grande Ile omaly maraina zoma faha 29 may 2020 fa tsy noraisiny mihitsy. Toa izany koa ny fangatahana fihaonana tamin’ny ramatoa Minisitra Andriamanana Josoa Iarimanana Rijasoa izahay fa tsy noraisiny ihany koa. Mahagaga nefa fa midradradra izy rehefa miresaka amin’ny mpanao gazety izay tiany ireo fa malalaka ny fihaonana aminy amin’ny mpanao gazety izay te hahalala vaovao. Inona no tsy nandraisan’ny SG sy ny minisitra anay omaly io?
Ny zavamisy nefa dia mameno efitrano iray lehibe ao amin’ny ministera ity ilay “bonbon” izay voalaza fa 8 miliara ariary no vidiny.
Tao aorianan’io fotoana io dia namory mpanao gazety izay tiany teny amin’ny INFP(Institut national de formation pédagogique) eny Mahamasina ny minisitra ka tamin’izany no nanambarany fa lainga ny filazana fa 8 miliara no vidin’ny “bonbon” ireo. Nanambara koa izy tamin’izany fa nisy tokoa ny “instruction” avy any ambony hividy “bonbon” hozaraina amin’ny mpianatra manerana an’i Madagasikara. Efa nisy ny voavidy tamin’izany hoy hatrany ny filazany, saingy nisy indray ny filazana avy any ambony fa hajanona indray ny fividianana izany “bonbon” izany.
Nisy koa fotoana izay nolazain’ny minisitra ity tamin’ny fahitalavitra fa misy vola izay nalaina tamin’ny “cantine scolaire” hividianana “bonbon” hoan’ny kilonga mpianatra. Raha ny fantatra koa dia hita fa mafy loatra ny tery tany amin’ny tambazotra tserasera dia voatery najanona tampoka ny momba ity “bonbon” ity.
Tsy mazava ny mahakasika ity “bonbon” ity. Tsy ampy ny fanazavana izay omen’ny minisitra ireo mpanao gazety nihaona taminy. Izahay mpanao gazety nanao ny fanadihadiana dia te-hahafantatra marina ny mahakasika ity raharaha ity satria hita fa mifono fanodinkodinam-bolam-panjakana izy io ary miendrika kolikoly avolenta ihany koa.
Tsy azo inoana ny tsy nisy volam-panjakana nividianana ireo “bonbon” izany na dia ariary aza araka ny filazany tamin’ny mpanao gazety nihaona taminy omaly io. Tokony hitondrana porofo izany satria baoritra aman-jatony maro no feno “bonbon” ao amin’ny ministera ao omaly zoma 29 may 2020. Raha fanomezana ireo “bonbon” ireo dia avy aiza ary nahoana no tsy lazana toa ny fanomezana rehetra ireny hoe misy olona nanome fanomezana ny ministeran’ny fampianarana? Iza ilay nanome izany?
Be dia be ny zavatra azo anontanina mahakasika izany na ireo olona nanome baiko azy hividy sy nanakana izany indray aty afara aza dia tokony holazainy ny anarany sy ny andraikiny.
Izany no ilazanay fa tsy mazava ary misy endrika fitantanana tsy mety sy mampiahiahy ao amin’ity ministera ity.
Raha hozaraina amin’ny mpianatra manerana an’i Madagasikara ireo “bonbon” ireo dia mpianatra manao ahoana satria ny fianarana mbola mihiboka amin’izao fotoana izao. Inoana fa hisy ny fanazavana bebe kokoa amin’ity raharaha ity satria raha tsy mazava sy miendrika fanodinkodinana volam-panjakana ny zavatra toa izao.
Banky Mondialy : Doniny tapany isika handoa erany
Inty sy Nday : Mitovy fa tsy sahala Ravalo sy Sarkozy
PEM : Maninona no tsy mbola mivoaka ?
Coronavirus : Amafiso ny fampiharana ny fepetra
Vontovorona : Nivadika fandrobana sy fandoroana entan’olona ny fitakian’ny mpianatra
Fanavaozana ny Lisi-pifidianana : Tafakatra 5 hetsy sy 10 tapitrisa mahery ny isan’ny mpifidy
Marc Randrianisa : Iraka mazava hanapotika an’i Madagasikara
INTY SY NDAY : Ny mpitondra tiana tsy isoronana !
Resaka be : poaka aty !
Fiainam-pirenena : Mitotongana ny fomba fanaovana politika